About Us - Qingdao Haokun Machinery Co., Ltd
Edge hwokugaya hwakabvira Machine
Anopedzisa Beveling Machine
Qingdao Haokun Heavy Machinery Technology Co., Ltd iri kambani chinayo design, kugadzira uye kupedziswa zvokushandisa simbi, simbi rinopfungaira, migodhi uye kudzivirira zvakatikomberedza. Huru zvigadzirwa zvinosanganisira Yakarurama musono Welding Pipe Mill (kana ERW), Spiral Welding Pipe Mill, Longitudinal achiveura Production Line, Edge hwokugaya hwakabvira Machine nemamwe ebetsero midziyo, akadai Hydrostatic Testing Machine uye Pipe Nemusikana Beveling Machine.
The kambani iri mu yevedza Jiulong Town Industrial Park Jiaozhou City Qingdao muna Shandong Province, China, iri ibwe kubva HuangDao Container Terminal, mukuru Container Terminal KuNorthen China. The yakakunakira chokufambisa rinounza zvikuru zvakanaka ezvinhu kuti aina michina mikuru. Zvakare, fekitari ndiyo yakabatana vazhinji nomugwagwa network, pamwe Jiaozhouwan Highway kumaodzanyemba, ayo pasina mubvunzo kunounza midziyo zvikuru zvifambiso kurerukirwa vose mumhuri uye mhiri kwemakungwa vatengi.
Wokutanga-pavaipfuura chirimwa kuvakwa rinotora imwe nharaunda dzinenge 43900 mativi metres, pamwe zvachose yesangano pamusoro 89million Yuan (kumativi 13million USD). The kambani muridzi pamusoro chepamusoro nyanzvi China mu mutopota mutsetse kugadzirwa, chakanakisisa vagadziri uye kutarisirwa matarenda, 136 mechanicians uye 39 wevanamakanika ose zvenguva chechetere uye pamusoro. Pakupera kwa2009, Haokun achatora pamusoro mumwe 60000 mativi metres nokuda kwayo zano wechipiri-padanho kuvaka somunhu okubhadhara, rinosanganisira R & D Center nenyere mitsetse mukugadzira chirimwa. Kudzidza wild nezvimwe boka, vanoramba innovating kuburikidza yokuronda pave yepamusoro pezvakaitwa uye ruzivo kubva makambani vatorwa, uye zvakanyatsorongwa ongorora mudzimba rinokosha tsika. Saka kure anoverengeka mhiri kwemakungwa nemakasitoma ndaripa kushanyirwa nokuti-nzvimbo tsvakurudzo, inivhesitimendi pamwe.
Mumakore apfuura kubvira pakagadzwa kambani, yava yaipiwa kuna Zhejiang Huzhou Jiuli Group, Baoji Petroleum Steel Pipe Co., Ltd, Shanghai BSW Petro-Pipe Co., Ltd uye Singapore Fengyu Private Company, pamwe Hydrotester pamusoro 1200 tani, 2000 tani uye 2800 tani azvaitwa, uye Pipe Kupedzisira Beveling Machines pamusoro Φ1620mm, Φ820mm, Φ2540mm, pamwe nokurondedzerwa siyana. Saizvozvowo munguva, vanoverengeka simbi mukuru-mugiredhi uye hombe dhayamita nomoto-nyere zvigayo zvakavakwa ndokuiswa kushanda, pakati zvakanga vaviri ERW24 '' vangaruramisa musono nomoto mutopota zvigayo rinezvigaro dhayamita mudzimba China nokuda Liaoyang Large Pipe Company uye Guangzhou Juyi Steel Pipe Co., Ltd; nhatu Spiral Welding Pipe Mills rurefu simbi mugiredhi X80 andΦ1422mm nokuda Yangzhou Tongya Steel Pipe CP., Ltd uye Petroliam Nasional Berhad (Petronas). Saka kure pamusoro shanu inokwana zviyero vave pamusoro kutungamirira chechetere zvose muno uye kumaodzanyemba uye kumadokero kweAsia.
Haokun Company rave kuramba vakabata basa muuzivi "Quality Chokutanga, kugara pasi Contract, Customer dzidziso uye Excellent Service" uye nomwoyo wose anopa zvose mumhuri uye mhiri kwemakungwa nemakasitoma vane mabasa akadai zvinetso zvakaoma-nut zvesainzi, mumapepa design, kugadzira uye kugadzira, chokugadza nekuongororwa, ano chinja uye kwesayenzi Consulting, munzvimbo simbi, simbi rinopfungaira, migodhi uye kudzivirira zvakatikomberedza. Haokun Company kwave uye nguva dzose uchava akazvipira customization, internationalization kuenderera pamusoro kwazvo nomoto mutopota vagadziri. Our Chinangwa chawo kuva wokutanga weDanho vachida!